China Sika-to-Size services ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
I-DHUA inikeza ukwenziwa kwepulasitiki okwenziwe ngekhwalithi ephezulu ngamanani angabizi. Sika i-acrylic, i-polycarbonate, i-PETG, i-Polystyrene, namanye amashidi amaningi. Umgomo wethu ukukusiza wehlise imfucuza futhi ugcine kulayini wephrojekthi ngayinye yokukhiqiza i-acrylic noma iplastiki.
Izinto Zokusebenza Kwishidi zifaka okulandelayo:
• I-Extruded noma i-Cast Acrylic
• Futhi nokuningi - Sicela ubuze
Pamashidi wokugcina Cut kuya Size kanye Nemisebenzi Yokubumba
I-DHUA inikela ngezinhlobonhlobo zezinketho zezinto ezisetshenziswayo zeshidi nesimo sezisombululo zokusika ubuciko zazo zonke izidingo zakho zokukhiqiza. Umgomo wethu ukukusiza wehlise imfucuza futhi ugcine kulayini wephrojekthi ngayinye yokukhiqiza i-acrylic noma iplastiki.
Sinikeza izinsizakalo zokusika ngokunemba ngemishini yokopha i-CNC nemishini yokusika i-laser. Singasika futhi siqophe isithombe osithandayo, isiqubulo, ilogo, isilinganiso, njll. Kunoma yisiphi isayizi, ukuma, nesitayela osithandayo. Kusuka eshidini elilula kuya emigqeni eyinkimbinkimbi nokulebula, ucezu olulodwa noma ukukhiqizwa kochungechunge - konke kwenziwa kwaba nokwenzeka ngemishini yethu yokusika.
Laser ahlabayo: Ilungele izinto ezilula ngokwejometri kanye nezinto eziyinkimbinkimbi ezingagaywa ngokunemba kwemininingwane eyeqile. Amaphethelo wezinto ezisikiwe zepulasitiki anokuphela okucwebezelayo - i-laser cut acrylic noma i-plexiglass eyenziwe ngokwezifiso, ngokwesibonelo. Inezinga eliphakeme lokuguquguquka futhi ingaphatha amaphrojekthi kunoma yiliphi izinga lobunzima. Umshini wokusika we-laser ushiya umphumela ocwebezelayo emaphethelweni wezinto ezifana ne-acrylic.
Ukuzisika kwe-CNC: Ilungele izinto ezilula ngokwejometri kanye nezinto eziyinkimbinkimbi ezingagaywa ngokunemba okuningiliziwe kwemininingwane. Awukho omunye umshini wokusika noma wokuqopha owenza kangcono ezintweni eziqinile kune-CNC. Ngomshini wokusika we-CNC, umkhiqizo odingekayo ungalinganiswa ngokwezifiso, ubunjwe futhi ube nesitayela ngomklamo oyingqayizivele wokudala.
Ukuzisika Ngokwezifiso nokuqopha (i-Laser ne-CNC Cutting)
Precision Cutting: engela ukusikeka, Bandsaw ukusikeka, Amaphethini, Circle ukusikeka
Precision Hole Drilling, Countersink, Ukuthepha
Ukuphrinta ku-Acrylic noma Amanye AmaSpredishithi Epulasitiki
Idizayini Yomkhiqizo Nobunjiniyela
Sika-ku-oda i-Acrylic noma amanye amaSpredishithi Eplastiki
Imidwebo noma imidwebo
Ifayela le-AI noma i-PDF yemisebenzi ye-Laser Cutting
Izimfuneko zethu Zemihlahlandlela:
Ama-Plastics wekhwalithi ephezulu, Ukwenziwa Kwenkambiso. Cela i-Quote Namuhla! Sikulungele Ukusiza Ukuklama & Dala Okudingayo Ngephrojekthi Yakho.
I-Acrylic Garden Mirror Sika Kusayizi
I-Acrylic Mirror Sika Kusayizi
Ishidi le-Acrylic Mirror Sika Kusayizi
Sika Usayizi We-Acrylic Mirror
AmaSpredishithi Esibuko Esisikiwe
Ukusika i-Acrylic Mirror
Iyaphela Acrylic Ishidi Ukuze Laser Cutting
Mirror Acrylic Ishidi Sika Usayizi